I-EN877 Imibhobho yeentsimbi yeGrey Cast, Iziqwengana zeNtsimbi engenanto, Isigqubuthelo seMholehole kunye neMigcobo - iJipeng
Siyingcali yemibhobho! Siyingcali yokuphosa!
I-EN877 imibhobho yentsimbi engenanto
Izibini zeNtsimbi ezingenazitovu kunye neeRhasi
Imibhobho yesinyithi ye-Ductile kunye neFlanged Fittings
Ukudityaniswa kweManhole kunye neeFram
Yasekwa ngonyaka ka-1998, inkampani yethu inembali ende, ethi yona mayiphume ngaphezulu kweedola ezingama-20 ezigidi zaseMelika. Sinezinto ezinamava zokusebenzela abathengi bamanye amazwe, kubandakanya nomphathi weprojekthi okhethekileyo ukuxoxa ngeemveliso, ukuphatha amaxwebhu, njl njl. Singanikezela kungekuphela iimveliso ezisisigxina, kodwa sinokuba yi-OEM eprinta igama labathengi bamanye amazwe okanye uphawu, kunye Kananjalo bangenza iimveliso ezahlukeneyo okanye iindawo zokuphosa ngokwazo imizobo yomthengi welinye ilizwe okanye iisampuli.
Abathengi banokonwabela ukuhanjiswa okukuko ngokukuko nangokufanelekileyo kunye nokuhanjiswa kweempahla apha, enye yeengenelo zethu kukuqokelela iintlobo ezahlukeneyo zeempahla kwisingxobo esinye esipheleleyo, abanye abathengi bethu badinga ngaphezu kweentlobo ezi-5 zeempahla ngexesha elinye. Oko kuya kulunge ngakumbi kubathengi bethu.
Ulawulo lwethu lomgangatho yenye inkonzo exabisekileyo kubathengi bethu.Ngokuveliswa okanye ngaphambi kokuba kuthunyelwe, ulawulo lwethu lomgangatho luya kuya kumzi mveliso ukukhawulezisa ukuhanjiswa kunye nokujonga umgangatho kunye nengxelo ebhaliweyo. Amanqaku angafezekanga aya kwenqatshwa kulawulo lwethu lomgangatho, siya kubuza umenzi ukuba avelise kwakhona okanye aphucule umgangatho de babe bafanelekile ukuba bahlangane nabathengi bangaphandle.
I-EN877 iziqulatho zoTywala ze-Epoxy zidityaniswe
Imibhobho ye-BM8 ye-BM8
Imibhobho ye-EN877 KML
Imibhobho ye-NT877 ye-TML
BS4622 I-Spigot kunye neMibhobho yeSocket
Isembozo esenziwe ngokutsha seManhole kunye nesakhelo
Sinikezela ngezisombululo eziphucukileyo zenkqubela phambili ezinzileyo. Iqela lethu leengcali lisebenzela ukukhulisa imveliso kunye nokusebenza kweendleko kurhwebo